The Sims™ Mobile 15.0.2.69790 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 15.0.2.69790 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း The Sims™ Mobile
The Sims™ Mobile ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
User Agreement: http:terms.ea.com
Visit http:help.ea.com for assistance or inquiries
EA may retire online features after 30 days' notice posted on www.ea.comservice-updates.
သင်သည်သင်၏ Sims '' ကွဲပြားပွဲနှင့်ထူးခြားသောစရိုက်ကိုစိတ်ကြိုက်အဖြစ်သူတို့ကိုစရိုက်များပေးခြင်းနှင့်ဖက်ရှင်နဲ့ဆံပင်ပုံစံတွေနဲ့အတူပျော်စရာရှိခြင်း, သင့်ဖန်တီးမှုဖော်ပြ။ မစိုက်အစဉ်အဆက်မတိုင်မီမိုဘိုင်းအပေါ်ထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်အတူအကြိုက်ဆုံးဒီဇိုင်းများနှင့်စိတ်ကူးရွေးချယ်ရာတွင်, သင့် Sims ပြီးပြည့်စုံသောနေအိမ်ဆောက်လော့။ သူတို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်များပြီးမြောက်အတိုင်း, သင်တို့၏ Sims '' အသက်ချမ်းသာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုအချိန်လေးကိုတွေ့ကြုံခံစားဝါသနာကိုလိုက်ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုး, သူတို့ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပါတီ, မြို့ဝန်းကျင်သွားလာခြင်း, အထူးဖြစ်ရပ်များတက်ရောက်ရန်နှင့်သင်အကြိုက်ဆုံး Sims မှစတစ်ကာများပေးပါ။ သငျသညျအဘယျသို့ပုံပြင်များကိုပြောပြကြလိမ့်မည်နည်း
UNIQUE Sims CREATE
Sims '' ပွဲ, ဆံပင်ပုံစံတွေ, မတ်မတ်, မိတ်ကပ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ နှာခေါင်းကနေခြေချောင်းရန်, အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်! သင်ဖက်ရှင်ဆိုင်အတွက် Izzy အလွအတူတက်ရှိနေသေးသည်သည့်အခါထိုအခါအတူတကွတစ်ခုမမေ့နိုင်သောဗီရိုကိုတင်ထားရမည်။ Active ကိုသို့မဟုတ်ဂီတကဲ့သို့အသီးအသီး Sim များအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များကိုရွေးချယ်ပါ, သင်၏ Sims ဘဝအတှေ့အကွုံရဖို့အဖြစ်ကပိုထည့်ပါ။
သင့်ရဲ့ Sims ထိုလူအပေါင်းတို့သည်သောဘဝကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်တဲ့အိမ်ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။ မစိုက်ပရိဘောဂ, ကရိယာ, အလှဆင်နှင့်ပင်ရေးရာ collection များကိုအမျိုးမျိုးကနေရွေးချယ်ခြင်း, အိမ်အပြင်အဆင်နှင့်ဒီဇိုင်းများကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ။ ထိုအခါဖက်ရှင်စတူဒီယို, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်နိုက်ကလပ်နဲ့တူကြောက်မက်ဘွယ်, စိတ်ကြိုက်နေရာများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သင့် Sims ထွက်ယူပါ။
သင့် Sims '' ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် Shape
ဆက်ဆံရေးနှင့်မိသားစုများအလုပ်အကိုင်များနှင့်ဝါသနာကနေသင့်ရဲ့ Sims '' ဘဝတွေကို၏ပုံပြင်များကိုလမ်းပြ။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ဆရာဝန်များကဲ့သို့အလုပ်အကိုင်များနှင့်ဟင်းချက်တူသောဝါသနာနှင့်ဂစ်တာတီးခတ် Pick ။ အခြားအ Sims နှင့်အတူဖော်ရွေများနှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးရှိသည်နှင့်တစ်ဦးနမ်းဘို့ကြိုးစားနေသို့မဟုတ်တစ်ခုစမ်းသပ်စာရွက်တီထွင်တူသောအန္တရာယ်များလုပ်ဆောင်ချက်များယူပါ။ တစ်မိသားစု Start နှင့်အစွမ်းထက်အမှေပုံပါအထူးပစ်စညျးဆင်းဖြတ်သန်းနေဖြင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်ဘို့လမ်းကိုဖန်တီးပါ။
သငျသညျသွားလာခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်ဝင်ငွေနိုင်သောနေရာကတခြား Sims နှင့်အတူပါတီများနှင့် host တက်ရောက်ရန်။ , သင့်အံ့သြဖွယ်အမျိုးကိုပယ်ပြရန်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးနှင့်ပင်အခြားလူများရဲ့ Sims နဲ့ရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်။ အဆိုပါပန်းခြံဒါမှမဟုတ်စျေးရင်ပြင်ဂီတပွဲတော်အတွက်မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့တူသောအထူးနေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်များ join ။ Plus အား, ပါတီများမှာသို့မဟုတ်မြို့တွင်းန်းကျင်ကတခြားကစားသမား '' Sims တွေ့ဆုံရန်နှင့်သူတို့က, ချစ်စရာပူ, ဒါမှမဟုတ်အလွင့်ဆိုပါကသူတို့ကိုသိစေရန်စတစ်ကာများကိုအသုံးပြုပါ!
သင်သည်သင်၏ Sims ဘို့ကြီးတွေနှင့်အသေးစားအချိန်လေးကျွမ်းကျင်စွာတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်နှင့်ဘဝ The Sims မိုဘိုင်းအတွက်သူတို့ကိုယူဘယ်မှာကြည့်ဖို့အဆုံးမဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်!
အရေးကြီးစားသုံးသူပြန်ကြားရေး။ ပြတချို့ကပုံရိပ်တွေ In-app ကိုဝယ်ယူမှုင်နိုင်ပါသည်။ ဒီ app: တစ် persistent အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု (ကွန်ယက်ကိုအခကြေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်) လိုအပ်သည်။ EA ရဲ့ Privacy & Cookie ပေါ်လစီများနှင့်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်များ၏လက်ခံမှုလိုအပ်သည်။ In-ဂိမ်းကြော်ငြာလည်းပါဝင်သည်။ (အသေးစိတ်ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေး & Cookie ပေါ်လစီကိုကြည့်ပါ) တတိယပါတီ analytics နည်းပညာမှတဆင့်ဒေတာစုဆောင်း။ ကစားသမား In-ဂိမ်းပါတီချက်တင်အင်္ဂါရပ်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီ app ကို Google Play ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည် 13 ကျော်တစ်ဦးပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်အင်တာနက်နှင့်လူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ်များတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။ Google ကနေ log out သင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားမျှဝေချင်ကြဘူးလျှင်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီဂိမ်းန်ဆောင်မှုများ Play ။
အကူအညီများသို့မဟုတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့အ http:help.ea.com သွားရောက်ကြည့်ရှု
ရက်ပေါင်း 30 '' အသိပေးစာ www.ea.comservice-updates အပေါ် posted ပြီးနောက် EA ၏အွန်လိုင်း features တွေအနားယူလိမ့်မည်။
The Sims™ Mobile အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
The Sims™ Mobile အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
The Sims™ Mobile အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
mr-robot-games စတိုး 6.52k 11.62M
The Sims™ Mobile ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း The Sims™ Mobile အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 15.0.2.69790
ထုတ်လုပ်သူ ELECTRONIC ARTS
File Size: 103.81MB
Release date: 2019-08-01 03:00:00
The Sims™ Mobile APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ